Ny Type Champions Awards no loka Monotype vaovao | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | loharanom-baovao, maro
La ny typography dia zava-dehibe kokoa noho ny ankehitriny amin'ny pejy fitaterana, bilaogy sy maro hafa, saingy tsy dia ekena amin'ny zavatra rehetra izay tena omeny antsika rehefa tonga amin'ny tranokala iray isika. Ny taratasy voalohany dia matetika omen'ny taratasy ary izany no hamporisika antsika hanomboka hamaky fehintsoratra isaky ny fehintsoratra.
Ho an'ity Monotype dia namorona loka manokana izay orinasa miloka amin'ny fanatsarana ny endritsoratra na ny famoronana azy manokana izay mamantatra ny marika no homena valisoa. Afaka mahatadidy an'izao andro izao isika ao ambadik'ilay nanatsara an'i Twitch hahatonga azy io ho tonga lafatra kokoa.
Miresaka momba izany isika ny Type Champions Award ary tonga amin'ny fanekena ireo marika izay manasongadina ny endritsoratra izay ho hitantsika any amin'ny tranonkala tsy tambo isaina na koa amin'ny doka fampielezan-kevitr'izy ireo.
Vonona i Monotype hanangana programa fanomezana loka vaovao hahafantarana ny tsara indrindra amin'ny famolavolana typografika sy ny famantarana ny marika. Tsy te halahelo ny antsipiriany momba an'io ianao! #typography #typedesign pic.twitter.com/QTktWn1btX
- Monotype (@Monotype) Septambra 12, 2019
Izany hoe, i Monotype no miandraikitra ny famoronana izany vondrom-piarahamonina famoronana izany izay hanampy antsika hamantatra marika sy maso ivoho manam-pahaizana amin'ny fanatsarana ny endritsoratra.
Ary ny marina dia misy endritsoratra izay mametraka fironana, ankoatry ny fampifandraisina amina marika iray. Mahita an'io loharano io izy, ary efa fantatsika hoe iza no hampifandraisina. Eo no miditra ny asan'ireo mpanakanto mpamorona izay manandrana mametraka ireo fiolahana ireo ao anaty taratasy andao hanaiky haingana an'i Duolingo miaraka amin'ny typeface vaovao.
Monotype mamela ny mpamorona, mampiseho ny asany amin'ny marika, ampidiro ny fanendrena ary mahazoa ny iray amin'ireo loka. Na dia tsy mila asehonao aza izany fifandraisana izany mba handraisanao anjara amin'ireo mari-tsoratra typeface ireo.
Manana isika na ny pejin-tranonkala azontsika atrehana aza hahafantarana ny loka sy ny daty hanatanterahana azy ireo. Eto anananao ny tranonkala. Tolo-kevitra mihoatra ny mahaliana sy manan-danja hanome fanazavana ny mpamorona sy ny marika tsara indrindra mametraka ny marika amin'ny loharano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Monotype dia mandefa ny loka azony mba hiteraka marika izay manolo-tena amin'ny typografia
Adobe dia mampiseho ny majika amin'ny fitaovana "Content-Aware Fill"